Kabaha ugu adduunka ugu qaalisan, waxaa qoray Louis Vuitton | Ragga Stylish
Kabaha ugu qaalisan adduunka, waxaa qoray Louis Vuitton
Fasal yeesho | | Calzado
10.000 Dollar (ama 7.350 euro) qaasatan waa waxa kabahaani ka socda shirkada Faransiiska ay qiimeeyaan Louis Vuitton, Ma noqon karin mid kale oo muujiyey sharafta raaxada leh ee ku jirta buugeeda kabaha ugu qaalisan adduunka. Gaar ahaan waxaan ka hadlaynaa Richelieu Manhattan oo maqaar yaxaas ah ku sumoobay, oo ka tirsan ururinta guga-Xagaaga ee sumadda.
Waa waxa yaxaasku haysto; Taasi waa qaali. Oo hadaan kor ku darno dufanka maqaarka, tolida, daloollada iyo kelidii maqaar gacmeed lagu rinjiyeeyaySababtoo ah qiimuhu wuxuu u baxayaa illaa xad xaddidan, iyo xitaa ka sii badan haddii aan ku dareyno saxanka Louis Vuitton ruthenium ciribta.
Waxaan ka door bidaa yaxaaska noocyada kale ee kaabayaasha caqliga badan, runta ayaa ah, waxaan u arkaa kabo xad dhaaf ah eccentric (inkasta oo kuwani yihiin caqli ku filan yaxaas). Sikastaba, haddii ay umuuqato xad dhaaf inlagu bixiyo in kabadan hal milyan oo duug ah kabahaas laakiin waad jeceshahay tusaalaha, waxa kale oo jira hilib calfskin iyo "kaliya" agagaarka 500 euros.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Calzado » Kabaha ugu qaalisan adduunka, waxaa qoray Louis Vuitton
Waxaan u maleynayaa inay si isku mid ah adiga kugu saabsan yihiin kabaha yaxaaska. Laakiin kabaha qaaliga ah, kan saaxiibkay Tom Ford, maalin dhaweyd dukaan ku yaal Madrid waxaan raadinayay bal inaan helo wax seddex laab ah B oo waxaan helay kabaha yar ee calfskin, yaxaas ma jiro 3500 iyo 4000 euro, waan sameeyaa ma doonayo in aad ka fikirto hadday yihiin baaruud, qumbaha ama gorayada. Waxay ku xigi jireen "caadi" ee 300 euro waxaanan u maleynayay inay tani khalad tahay illaa aan ka arkay in si ku habboon dhammaan dadka uu saxiixay Tom Ford ay haysteen qiimahaas. Ma aqaano inay uqalmayaan, laakiin waligey kabo kuma iibsan doono qiimahaas laba xilli, marka shirkadaha kale ee dhaqanka badan leh ay u dhigmaan 10%, waxay u fiican yihiin kuwaan iyo kuwa aad soo jeedineysaba, kuwa hodanka ah ayaa la ikhtiraacay.
Habsiinta oo ku sii wad sidan
Javier R, dijo
Aniga iima muuqato in qiimaha kabahan uu qiil u leeyahay gabi ahaanba, shaqada furitaanku waa sida ugu qaalisan maqaarka yaxaaska sida maqaarka lo'da, kaliga ayaa lagu rinjiyeeyay ama gacanta ayaa lagu tolay, qiimaha qiimuhu kor uma kacayo xitaa 50 euro, maqaarka Yaxaaskuna waa mid qaali ah haa, laakiin waxaan ka hadlaynaa Oxford aan lahayn hal ama labo goyn, laakiin inbadan oo badan, taasi waa in la yiraahdo waxay ka dhigaan inta badan maqaarka. Waxaan xasuustaa hawraar aan haystay dhawr sano ka hor markii aan dalbaday xoogaa kabo yaxaas ah Manolo Blahnik, qaabkii caanka ahaa ee Mario, markii la codsaday, iyo in hal xabbo (oo aan la jarin), ay ku kacday wax ka yar 3000 euro. Waxaa la buunbuuniyey 7000 ee Vuitton weydiisto. Xitaa iyadoo sidaas ah, aniga iima muuqdaan kuwa adduunka ugu qaalisan, waxaa jira kuwa ka qaalisan. Jesus Cánovas wuxuu leeyahay kabo ka qaalisan.
Jawaab Javier R,
Qiimaha noocan oo kale ah ee la buunbuuniyey waxay iila muuqataa baahi aad u ba’an oo loo qabo nooca raaxada si ay isu muujiso; oo ka duwan kuwa marka loo eego isbeddelada hadda socda ay u dhaqaaqayaan raaxo "la heli karo".
Alejandra sepulvera castro 119 dijo
Waad salaaman tihiin ps waxaan leeyahay kabahaasi waa kuwo aad u qurux badan laakiin xoogaa qaali ah laakiin ps waxay u egyihiin ragga labka ahna waxaan ahay dhedig waxaan ubaahanahay xoogaa cidhib ah sida qabow laakiin dumarka haye
Jawaab alejandra sepulvera castro 119
Ma jecli inay yihiin wax laga naxo oo qaali ah ???? Cusboonaysii hahahahahaha
Ku jawaab Edgarmoreno
Shandad Samsonite si loogu dabaaldego boqol jirsatay
Kareemada is-maqaar saar, waxaad u baahan tahay inaad ogaato